ကြယ်တစ်စင်းရဲ့အလင်းရောင် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 24, 2007, 10:50 am
၃ပတ်ကျော်ပြီ မနားမနေ တစ်နေကုန် မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် အလုပ်များနေတာ … အသက်တောင် အနိုင်နိုင်ရှုနေ၇တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် သနားတောင်သနားလာမိသလိုပဲ 😀 😀 …
မိသားစုကိစ္စက တစ်ဝက် ၊ ကိုယ့်ကိစ္စတွေက တစ်ဝက်နဲ့ အလုပ်တအားများလို့ အွန်လိုင်းဘက် ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တာထက် သံလွင်အိပ်မက် ဧပရယ်လ်အစ်ရှုးအတွက် စာရေးလို့မပြီးခဲ့တာ အားနာမိပါတယ် .. ။ အယ်ဒီတာတွေကို အားနာတာ မဟုတ်ပါဘူး … ။ စာဖတ်သူတွေကိုပါ … ။ လင်းကလည်း ကြီးကျယ်တယ်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်ရမလား .. ။ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ဆို ရေးတာ ၊ ပြန်ပြင်တာ ၊ မလိုတာ ပြန်ဖြုတ်တာ ၊ လိုအပ်တာ ပြန်ဖြည့်တာက သီတင်းပတ်တော်တော်ကြာတယ် … ။ ဇတ်တစ်ခုရဲ့ ကုန်ကြမ်းကိုလည်း တော်တော်လေး စဉ်းစားတယ် .. ။ ပြီး၇င်ပြီးရောစာတစ်ပုဒ်ဆိုပြီး ရေးလေ့မရှိဘူးလေ.. ။ ဘလော့ခ်မှာ ပို့စ်တစ်ခုရေးဖို့ တစ်ခါတစ်လေ ရက်တော်တော်ကြာ ပြန်စဉ်းစားတာတွေလည်း ရှိပါတယ် … ။ ဘယ်အရာမဆို ပြီးရောပြီးရောလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို မုန်းတတ်တယ် .. ။
လင်းဇတ်လမ်းတွေဖတ်ဖူးသူဆို ပိုသိမှာပါ … ။ စာမျက်နှာများသလို ဇတ်မပေါသွားအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းပေးထားပါတယ် … ။ နောက် လင်းရဲ့ အကျင့်တစ်ခုက နေရာဒေသတစ်ခုအကြောင်း ရေးတော့မယ်ဆို ကိုယ်မသိတဲ့နေရာဆို၇င်အောင် အဲဒီနေရာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ၊ Video တွေ အကုန်ပြန်ကြည့်တယ်.. ။ အဲဒီနေရာရောက်သွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်သွင်းထားရတယ်.. ။ စင်ကာပူနေရာတွေ ထည့်ရေးမယ်ဆို အဲဒီနေရာကို အားတဲ့နေ့ ပြန်ပြီးထပ်သွားတယ် … ။ မသုံးရင်တောင် ပုံတွေရိုက်ထားတယ် … ။ နောက် မကြာခဏပြန်ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်. .. ။ အခုတစ်ကြိမ်က ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို အချောမသတ်နိုင်တာရယ် ၊ မအားတာရယ်နဲ့ ဒီတစ်ခေါက် Issue တော့ သည်းခံပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..။
လင်းဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးက အိပ်မက်တစ်ခုလို့ပဲ လင်းက အမြဲသဘောထားခဲ့တယ် .. ။ အိပ်မက်ဆိုတာ မိုးလင်းသွားရင် ပြီးဆုံးသွားမှာပဲလို့ တွေးထားခဲ့တယ် .. ။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာ လင်းဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အလင်းရောင်တစ်စင်းက လင်းဘ၀ထဲကို ဖြာဆင်းလာခဲ့တယ် … ။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိမိပါတယ် .. ။ လင်းက ပါစင်နယ်တွေ ရေးလေ့မရှိပါဘူး .. ။ ဒီပို့စ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ၀န်ခံချက်ပါ … ။
လင်းအိပ်မက်က ဘာလည်းလို့ မေးတတ်ကြတယ် .. ။ အတိအကျ ဖြေလေ့မရှိခဲ့ဘူး .. ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဖြေပြီးရင် ဘာမှအကျိုးမရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရလို့ပါ … ။ လင်းလက်ကြယ်စင်က နိုင်ငံေ၇းသမား မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ လာလာအော်တတ်တဲ့ လူအားလုံးကို အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ “ကျမက အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတာပါ ၊ နိုင်ငံရေးသင်ချင်စိတ်လည်း မရှိပါဘူး” .. ။ ဒါပေမယ့် မှန်ရာကိုတော့ ရေးဖို့အတွက် ကျမမှာ ခွန်အားအပြည့်ရှိပါတယ် .. ။ ကျမက Independent Girl ပါ .. ။.. ။ မှန်ကန်သော အခွင့်အရေးကြိုးစားမှုအတွက်ဆိုရင် ဘယ်အဖွဲ့မဆို ကျမလေးစားရင်တော့ ပူးပေါင်းပါဝင်လေ့ရှိပါတယ် .. ။
ကျမကို ချစ်တဲ့သူ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလည်း ကျမ မသိပါဘူး .. ။ ဒါပေမယ့် မုန်းတဲ့သူ ဘယ်လောက်ရှိလည်းတော့ ကျမသိပါတယ် .. ။ အဲဒီအတွက် ကျမ ဘာမှလည်း ဂရုမစိုက်တတ်ပါဘူး .. ။ ကျမစာတွေ အားပေးတဲ့သူ ဘယ်လောက်ရှိလည်း ကျမ မသိပါဘူး .. ။ ကျမ စာတွေကို လည်ပတ်တဲ့သူ အရေအတွက် ဘယ်လောက်လည်းတောင် ကျမသိအောင် မလုပ်ထားပါဘူး .. ။ ကျမလိုချင်တာက ကျမက ကျမစိတ်ထဲက ကျမယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားအတွက် Standing Alone ပါပဲ .. ။ စာဖတ်သူတိုင်း ၊ ကျမကို အားပေ့းသည်ဖြစ်စေ ၊ မအားပေးသည်ဖြစ်စေ အားလုံးကို လေးစားစိတ်ရှိပါတယ် .. ။
ကျမရဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ချင်တာက Interior Decorator ။ ကျမက ရင်ထဲကယုံကြည်ချက်နဲ့ ကျမ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းရာ စာများကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ရေးချင်သေးတယ် .. ။ ကျမရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကျမရဲ့မိသားစုက ခွင့်မပြုတဲ့အတွက် ကျမက အားလုံးကိုချောင်ထဲထိုးထည့်ထားခဲ့ရတယ် .. ။ ကျမရဲ့ဘ၀မှာက ကျမလုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ကနည်းပြီး ကျမ မဖြစ်ချင်တာတွေချည်း ရှေ့တန်းတင်ပေးခဲ့ရတာ များခဲ့တယ် … ။
ကျမ ဖြစ်ချင်တာတွေကို အသက်သွင်းပေးတဲ့ ”သူ့”ကို ကျမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ။ စိတ်ကူးလှလှတွေနဲ့ချည်း ပုံဖော်ချင်တဲ့ ကျမဘ၀မှာ ငွေတွေချည်းနောက် ကောက်ကောက်လိုက်ရတဲ့ ပညာရပ်ကို အမှန်ပြောရရင် တစ်စက်မှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး … ။ ၀တ်ကျေတန်းကျေလောက်ပဲ ကျမလုပ်ခဲ့တာများတယ် … ။
ကျမဘ၀ရဲ့ အဆင်မပြေမှုများစွာကြားမှာ လက်ကျန်တဲ့ မာနတစ်ခုကပဲ ကျမကို အမြဲတင်းခံပေးထားခဲ့တယ် .. ။ လိုတာတစရာ မလိုလောက်အောင် အလိုက်သိတဲ့ “သူ“ ကျမ ဘ၀ထဲရောက်လာခဲ့တာ သူနဲ့ကျမ ခံယူချက်တစ်ခုကြောင့်ဆိုရင် ကျမ ပိုပြီးဝမ်းသာနေမှာပါ .. ။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ မထားတတ်တဲ့ ကျမရဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ ကျမဖြစ်ချင်တာတွေ အလင်းရောင်သန်းလာခဲ့တာ တစ်ခါတစ်လေ အိပ်မက်များလား ကျမ ထင်မှတ်ခဲ့ရသေးတယ် .. ။ ကျမက ဘာတွေပဲကြုံလာခဲ့ရရ ၊ တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်အံတုခဲ့ရတာ များတယ် .. ။ အခုတော့ ဘယ်အရာမဆို ကျမဘေးမှာ အတူရှိနေပေးတဲ့ “သူ့”ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် .. ။
ကျမစိတ်ကူးတွေကို တကယ်ဖြစ်လာအောင် ၊ ကျမအမြဲပြုံးပျော်နေအောင် ၊ ကျမသွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ နွေးထွေးမှုတွေပြည့်နေအောင် ၊ ကျမကိုယ်ကျမယုံကြည်မှုတွေ ပိုတိုးလာအောင် ၊ ကျမလိုချင်တာကို အမြဲရှေ့တန်းတင် လုပ်ပေးခဲ့တာ ………. မြင်သူတကာ အားကျလောက်အောင် နွေးထွေးအေးမြတဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ …. ကို …. ။
ကျမသွားမယ့်လမ်း ပန်းခင်းလမ်းထက် ပိုလှပအောင် ကြိုးစားဖန်ဆင်းပေးနေခဲ့တာတွေအတွက် ရင်ထဲက သစ္စာတရားက ကျေးဇူးပါ … ကို ။
ကျမရဲ့ဒေါသတွေကို အပြုံးပန်းတွေအဖြစ် ပြန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ .. ကို ။
ကျမလေးစားရသူလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ ကျမထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုထက်မြက်ထူးချွန်သူတစ်ယောက်က ကျမကို အရာအားလုံးထက် ပိုမြတ်နိုးခဲ့တာ ရင်ထဲက မေတ္တာတရားက ထာဝရကျေးဇူးပါ .. ကိုို ။
Congratulation, sis . Wish you have happy return of the days.
Comment by Anonymous March 26, 2007 @ 3:47 pm
ur happiness is my wish, sis. wish ubhappy with ur love.bunderstanding. nbcareful. too much is as bad as too little. 😛
Comment by Kreator March 26, 2007 @ 5:13 pm
It is nice to read.. Keep it up.. =)
Comment by demo March 27, 2007 @ 1:11 am
Comment by Jr. Moe Swe March 27, 2007 @ 1:44 am
nice reading is becoming your life
Comment by bobowin March 27, 2007 @ 10:41 am
finally , you are back. we have been waiting
Comment by Christina March 27, 2007 @ 12:06 pm
အကိုရဲမြင့် .. ဟုတ်ကဲ့ အကို.. ကျေးဇူးအထူးနော် .. မများ မနည်း အချစ်က ပိုကောင်းပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ် …
Sis Demo, Thank You !
ဲJr. Moe Swe, Thank You, Bro !
Bro Bo Bo Win , Thank You, Bro !
Sis Christina, Thanks , sis…. I m back.. !
Comment by LIN LET KYAL SIN March 27, 2007 @ 1:10 pm
Wish you can love unconditionally and with understanding!
Comment by Dewy March 29, 2007 @ 9:33 am
Hi my sis, Linlet
Nice to know you have got lover like him.
Wish your dream come true together with your ‘Ko’.
Comment by MELODY MAUNG March 31, 2007 @ 7:54 am
That’s good that u have someone love u and u love someone.Life will be full of happiness if someone love u.
Comment by khayayphyu April 5, 2007 @ 5:39 am
Comment by storyyy April 28, 2007 @ 7:18 am
finally you found LOVE!
but one thing i want to edit 😛
u should call him “Oo” not “Ko”
(friend from mmchat)
Comment by Anonymous October 12, 2007 @ 7:31 am
ခင်ဗျားရဲ့ တောမရောက်တောင်မရောက် အတွေးတွေကို ခံစားချက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရေးချင်ရာရေးထားတာကတော့ မနိပ်ပါဘူးဗျာ….
ခင်ဗျားရဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ရွှေကွပ်ထားသင့်တယ်ဗျို့…
Comment by Honey October 28, 2008 @ 9:25 am